မှတ်စုမှတ်တမ်း | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 42
ကြံ့ဖွံ့၏ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဥပဒေကို ဝေဖန်သုံးသပ်ခြင်း အပိုင်း (၂) ဦးမျိုး (ဥပဒေ)၊ ဇန်န၀ါရီ ၉ ၊ ၂၀၁၃ အပိုင်း (၂ ) နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေ (ဥပဒေ အမှတ် -၂၁/ ၂၀၁၂) ၊ အခန်း(၅) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပုံစံ ၊ ပုဒ်မ ၉ ။ ။ ရင်းနှီးမြှုပ်မှုကို အောက်ပါပုံစံ တစ်ခုခုဖြင့် ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်- (က) ကော်မရှင်က ခွင့်ပြုသော လုပ်ငန်းများ၌ နိုင်ငံခြားသားက နိုင်ငံခြား မတည်ငွေရင်း ရာခိုင်နှုန်း အပြည့်ဖြင့် ပြုလုပ်ခြင်း၊ (ခ) နိုင်ငံခြားသားနှင့် နိုင်ငံသား သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းတို့...
အုန်းနိုင် ဇန်န၀ါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၃ ● မိခင်ကြီး ဒေါ်ခင်ကြည်ရဲ့ ဈာပန ဒီလိုနဲ့ ဒီဇင်ဘာလကုန်ကာနီးမှာတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ဇနီး ဒေါ်ခင်ကြည် (ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မိခင်ကြီး) ကွယ်လွန်ပြီဆိုတဲ့ သတင်းကို နိုင်ငံတကာ သတင်းဌာနတွေကနေကြေညာပါတယ်။ တပ်မတော်ဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ဇနီးမို့ တပ်မတော်ရဲ့မိခင် ကြီးလို့လဲ ပြောနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးအမျိုးသမီးသံအမတ်ကြီးလဲဖြစ်ပြီး သီရိသုဓမ္မဘွဲ့ လည်းရထားတာမို့ တပ်မတော်က လည်း ဒေါ်ခင်ကြည်ဈာပနမှာ ၀ိုင်းဝန်းကူညီမယ်လို့ကမ်းလှမ်းလာပါတယ်။ ထိုက်သင့်တဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ပါ။ ဒေါ်စုကလည်း မိခင်ကြီးရဲ့ဈာပန ကို ပြည်သူကျောင်းသားအားလုံးကအေးချမ်းစွာ လိုက်ပါပို့ဆောင်ဖို့ မေတ္တာရပ်ခံခဲ့ပါတယ်။ ဒါကလည်း အကြောင်းရှိပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ (၁၅) နှစ်လောက်က ကုလသမဂအထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်း ဦးသန့်ဟာ အမေရိ ကန်မှာ ကွယ်လွန်ပြီး မြန်မာပြည်ကို ပြန်လည်သယ်ယူ သင်္ဂြိုလ်တဲ့အခါ အဲဒီတုံးက အစိုးရအကြီးအကဲ ဦးနေ၀င်းရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအာဃာတ...
ကြံ့ဖွံ့၏ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဥပဒေကို ဝေဖန်သုံးသပ်ခြင်း အပိုင်း (၁) ဦးမျိုး (ဥပဒေ)၊ ဇန်န၀ါရီ ၉ ၊ ၂၀၁၃ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ (၂၀၁၂ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွတ်တော် ဥပဒေ အမှတ် ၂၁) (၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၂ရက်) ကို ဝေဖန် ဆန်းစစ် သုံးသပ်ချက်။ အပိုင်း (၁) ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၂၁/၂၀၁၂ ဖြစ်သည့် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေ တွင် အခန်း ၂၀ ပါဝင်၍ ပုဒ်မပေါင်း ၅၇ ခုပါရှိပါသည်။ ယခင်ရှိခဲ့သည့် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ဥပဒေ (နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေး အဖွဲ့ ဥပဒေအမှတ်...
ကြံ့ဖွံ့လွှတ်တော်၏ ၂၀၁၂ တက္ကသုိုလ်ပညာရေး ဥပဒေ ဝေဖန်စာတမ်း (၄) ဦးမျိုး (ဥပဒေ)၊ ဇန်န၀ါရီ ၇၊ ၂၀၁၃ အပိုင်း (၄) လက်ရှိ ကြံဖွံ့အစိုးရ ထုတ်ပြန်ထားသော ပညာရေး အသုံးစရိတ် အခြေအနေကို အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရပါသည်။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွက် ကြံ့ ဖွံ့ အစိုးရ ၀န်ကြီးဌာန အချို့ အတွက် သုံးငွေပမာဏ နှင့် အသုံးစရိတ်ရာခိုင်နှုန်း ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ကျပ်ငွေ သန်းပေါင်း ၁ သန်း၊ ၁ သိန်းကျော် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ကျပ်ငွေ သန်းပေါင်း ၁ သန်း၊ ၁ သောင်းကျော် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ကျပ်ငွေ သန်းပေါင်း ၁...
ဘာတွေ ဖြစ်ကုန်ကြပြီလဲ – (Minn Luu)
ဘာတွေ ဖြစ်ကုန်ကြပြီလဲ မင်းလူ (၁၉ ၈၉ ) ဇန်န၀ါရီ ၆၊ ၂၀၁၃ (သည်ကဗျာကို ရေးပြီးဖြန့်လို့ အဲသည်နှစ်က အဲသည်စာရေးဆရာ ထောင်သွင်း အကျဉ်းချခြင်း ခံခဲ့ရတယ်။ ထောင်တန်တဲ့ ကဗျာပေါ့) (၁) အော်…… ဒုက္ခ ဒုက္ခ သူတို့ကြီးစိုးတဲ့ခေတ်မှာ အာဇာနည်ဖြစ်ရတာ မစားသာပါလားနော်။ တနှစ်တခါ ၀တ်ကျေတန်းကျေ အလေးပြုခံရ ဥက္ကဌ ကြီး၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့်လို့ တလျှောက်လုံးအော်ခဲ့ပြီး မအောင်မြင်ပဲကျဆုံးတော့မှ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လမ်းညွှန်ခဲ့တာပါလို့ လက်ညှိုးထိုး တရားခံ လုပ်ခံရ၏ သမီးအရင်းရင်း ခေါက်ခေါက်တောင် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပန်းခွေချခွင့် မရ။ (၂) ရွှေတိဂုံစေတီတော် ၀တ္တကမြေထဲမှာ ကျူးကျော်ဆောက်လုပ်ထားလို့ဆိုပြီး အာဇာနည်ဗိမာန်ကို လှိုင်သာယာ ပို့မပစ်တာပဲ ကျေးဇူးတင်ရမလိုလို တိုင်းပြည်ကို ချစ်သောတပ်မတော် မျိုးချစ်စိတ်ရှိသောတပ်မတော်...
ဇန်န၀ါရီ ၅၊ ၂၀၁၂ No tags for this post.
သတ္တုတွင်း၊ရေအရင်းအမြစ်နှင့် လက်ပံတောင်းတောင် မောင်ကျေးရေ ကယ်လီဖိုးနီယား ဇန္န၀ါရ်ီလ ၅၊၂၀၁၃။ စကားဦး သတ္တုတွင်းမျာ၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသည် လူနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အများစုကို နှစ်ကာလ၊ ဆယ်စုနှစ်များစွာ ဆိုးကျိုးများသက် ရောက်စေပါသည်။ ဤစာစောင်တွင် သတ္တုတွင်းများ၏ ရေအရင်းအမြစ်များအပေါ် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်ခြင်းနှင့် ထိုဆိုးကျိုးများသက်ရောက်မှု အနည်းဆုံး ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နည်းများကို အဓိကထား ရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သတ္တုတွင်း သတ္တုတွင်းဆိုသည်မှာ တန်ဘိုးရှိသောဓါတ်သတ္တုများ Minerals (ရွှေ၊ ငွေ၊ ကြေး၊ ရွေဖြူ၊ ခဲမဖြူ၊ အဖြိုက်နက်၊ ကျောက်သံပတ္တမြား စသည့်) (Gold, Silver, Copper, Platinum, Lead & Zinc and Precious Stone) နှင့် အဆိုပါဓါတ်သတ္တုများ ပါဝင်နေသော သတ္တုရိုင်း၊ မြေသားကျောက်သားများ (Ore...
ကြံ့ဖွံ့လွှတ်တော်၏ ၂၀၁၂ တက္ကသုိုလ်ပညာရေး ဥပဒေ ဝေဖန်စာတမ်း (၃) ဦးမျိုး (ဥပဒေ)၊ ဇန်န၀ါရီ ၅၊ ၂၀၁၃ အပိုင်း (၃) တိုင်းပြည်၏ စီးပွားရေး စနစ်၊ လူနေမှုစနစ်၊ ယဉ်ကျေးမှုစနစ်တို့နှင့် ကိုက်ညီ သည့် ပညာရေးစီမံကိန်း သို့မဟုတ် ပညာရေးစနစ်သည်သာလျှင် တိုင်းပြည်၏ ရည် မှန်းချက်ပန်းတိုင်သို့ ချီတက်ရေးအတွက် လုံးဝ အထောက်အကူ ဖြစ်ပေမည်။ ပြည်သူ လူထုကို အကျိုးပြုသော ပညာရေးစီမံကိန်း၊ တိုင်းပြည်က လက်ခံနိုင်သော စီမံကိန်းဖြစ် ပေလိမ့်မည်။ တိုင်းပြည်၏ အခြေအနေနှင့် ကင်းလွတ်ကာ ရေးဆွဲသော စီမံကိန်းနှင့် ဥပဒေများသည် အကျပ်အတည်း မြောက်မြားစွာကို ပေါ်ပေါက်စေကာ ပျက်စီးကြရ သည် မှာ သမိုင်းသင်ခန်းစာဖြစ်ပေသည်။ ၂၀၁၂...
(ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်၊ အတွဲ ၃၊ အမှတ် ၁၂၇၊ ဇန်နဝါရီ ၃၊ ၂၀၁၃၊ စာမျက်နှာ ၂၂) မြန်မာနိုင်ငံ ၏ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကို အနီးကြည့်အဝေးကြည့် (၄) အောင်ဒင် အပိုင်း (၄) ပုဒ်မ ၄ နှင့် ပုဒ်မ ၁၈ ဖျက်သိမ်းပေးပါ … ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်နေ့မှာ နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးကနေ “ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးခွင့် နှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လည်ခွင့်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ” ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၁၅ အဖြစ်နဲ့ အတည်ပြု ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်၊ အဲဒီလို နိုင်ငံသားများကို ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လည်ခွင့်ပြုတာကို နိုင်ငံတကာအစိုးရများက...
မြင်သာမြင် မကြင်ရသေးသည့် မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး သန်းဝင်းလှိုင်၊ ဇန်န၀ါရီ ၄၊ ၂၀၁၃ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ လူမျိုးတစ်မျိုး၊ တိုင်းပြည်တစ်ပြည်အတွက် အရေးကြီးဆုံးအရာကား လွတ်လပ်ရေးနှင့် အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဆိုင်ရေးပင် ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့ သူ့ကျွန်ဘ၀တွင် နှစ်ပေါင်းရာကျော် နွံနစ်ခဲ့ရသော နိုင်ငံအဖို့ကား လွတ်လပ်ရေးနှင့် အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဆိုင်ရေးသည် မည်မျှအရေးကြီးကြောင်း လူတိုင်းသိကြလေသည်။ လူ့ဘ၀တွင် လွတ်လပ်မှုဆုံးရှုံး၍ သူ့ကျွန်ဘ၀ဖြစ်ရခြင်းထက် ဆိုးရွားသော အရာသည် မရှိပေ။ လွတ်လပ်ရေးဆုံးရှုံးသော် ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ်ဖန်တီးခွင့် ဆုံးရှုံးရ၏။ သူတစ်ပါး၏ လက်အတွင်းဝယ် သွန်လိုသွန် မှောက်လိုမှောက်ခံခဲ့ကြရ၏။ အမျိုးသားစီးပွားရေးမှာ အောက်ဆုံးသို့ ကျဆင်းရ၏။ ဘာသာရေး၊ သာသနာရေး၊ ပညာရေးဆုံးရှုံးချို့တဲ့ရ၏။ နောက်ဆုံး အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုသည်ပင် အဖျော်ဖြေခံအဆင့်သို့ နိမ့်ကျ ကျဆင်းခဲ့ရပေသည်။ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့သည်မှာ ယခုအခါ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ...
Page 42 of 48«1...4041424344...48»
ပီနန်ဆရာတော်ကြီး၏ သြ၀ါဒ ကောက်နုတ်ချက်
အုန်းနိုင် - မန္တလေးသံဃာတော်များဧ။် ပတ္တနိက္ကုဇ္ဖန
ညိုထက်ညို – နံနက် ငါးနာရီ https://t.co/ObRxphJ1EN https://t.co/VrkyZ0uBjC about 19 minutes ago ReplyRetweetFavorite
ကိုသန်းလွင် ● ဆော်ဒီမင်းသား၏ အမေရိကန်ခရီးစဉ် https://t.co/2V0n7T5ZbS https://t.co/safEaTCfYc about 14 hours ago ReplyRetweetFavorite